Golaha Wasiirrada oo ansixiyay hubinta iyo tirakoobka Shaqaalaha Dowladda iyo qodobba kale - JNN24
Golaha Wasiirrada oo ansixiyay hubinta iyo tirakoobka Shaqaalaha Dowladda iyo qodobba kale
Golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa meel mariyay natiijadii kasoo baxday hubinta iyo tirakoobka shaqaalaha Rayidka ah ee Dowladda iyo xeer nidaamiyaha Machadka Caafimaadka Dalka, ka dib kulankoodii Khamiislaha ahaa ee ay Shalay ku yeesheen Muqdisho.
Wasiirrada caafimaadka iyo shaqada, ayaa Golaha uga mahad celiyay ansixinta natiijadii kasoo baxday hubinta iyo tirakoobka shaqaalaha Dowladda iyo xeer nidaamiyaha Machadka caafimaadka Dalka oo ka qayb qaadanaya dedaallada horumarinta arrimaha Bulshada ee Dalka.
Dowladda Soomaaliya ayaa 2018 iyo 2019 waxa ay tikarboob madax ka tirin iyo diiwaan gelin la socotay ku sameysay shaqaalaha Rayidka ah ee Dowladda.
Kulanka Golaha oo uu Guddoominayay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, ayaa sidoo kale looga hadlay amniga Dalka, tayeynta waxbarashada iyo heerka uu marayo wajiga Labaad ee dib-u-habeynta ciidamda qalabka sida ee Dalka.
← Shirka Maamulada gobolada iyo degmooyinka K/galbeed oo lagu soo gabagabeeyey Magaalda Beydhabo
Norway oo Soomaaliya siineysa deyn gaareysa $353 Milyan →